Magaalada Växjö oo cabasho ka muujisay tirada soo galootiga | Somaliska
Magaalada Växjö oo cabasho ka muujisay tirada soo galootiga
Maamulka magaalada Växjö ee gobolka Kronoberg ayaa qaylo dhaan ka muujiyay tirada soo galootiga u soo guuray magaaladaas sanadkii la soo dhaafay. Magaalada Växjö iyo Laanta Socdaalka Sweden ayaa heshiis ku galay in ay qaataan 200 qof sanadkii balse sanadkii la so dhaafay ayaa magaalada waxaa yimid dad intaas aad uga badan.
Maamulka magaalada ayaa go,aansaday in ay ka baxaan heshiiskii ay la galeen Laanta Socdaalka iyagoo sheegay in loo baahanyahay heshiis cusub in la sameeyo. Sidoo kale maamulka magaalada ayaa sheegay in ay dowlada ka dalbanayaan lacag dheeri ah oo lagu quudiyo dadka sida lama filaanka ah u soo degay magaaalada.
Magaalada Växjö oo keliya ma ahan magaalooyinka ka cabanaya tirada soo galootiga ee u soo guurtay dhinacooda. Inta badan magaalooyinka yaryar ayaa dhibaatadaas haysataa iyadoo aysan dadka u diidi karin in ay soo degaan magaalada.
Soomaalida ayaa ugu badneyn dadkii soo degay magaalada Växjö sanadkii la soo dhaafay. Laanta Socdaalka ayaa heshiis la saxiixata kamuunada kala duwan ee Sweden si ay u qaataan dadka sharciga la siiyay iyadoo heshiiskaas ay ku jirto lacagtii ku bixi lahayd qofka noloshiisa.